လေးဖြူ | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / လေးဖြူ
Category Archives: လေးဖြူ
လေးဖြူ – စိတ်ပူတယ် (2013) [Single]
[Released: Dec 18, 2013. Genre: Rock. File: MP3] ၀၁။ လေးဖြူ – စိတ်ပူတယ် (Mediafire) (or) ၀၁။ လေးဖြူ – စိတ်ပူတယ် (Shared) Credit – CNC Men’s Wear fb Fan Page
December 19, 2013 MMA အဆိုတော် (ကျား) လေးဖြူ Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
[Released: Oct 27, 2013. Genre: Rock. File: M4A & 320 kbps MP3] ၀၁။ လေးဖြူ – ဒိုင်ယာရီ.m4a ၀၁။ လေးဖြူ – ဒိုင်ယာရီ.mp3
October 27, 2013 MMA အဆိုတော် (ကျား) လေးဖြူ Myanmar Artist New Myanmar Albums 1 Comment
Albums Of Lay Phyu
ကန္တာရလမင်း ပင်လယ်အော်သံ ကန္တာရပင်လယ်လမင်းအော်သံ ဂီတ မဉ္ဖရီ ပါဝါ ၅၄ ကမ္ဘာသစ်တေး သားကောင် မံမီများ ကျိန်စာ (That is not in the folder yet, I’ll update it soon) အိပ်မက်ကဗျာ လိပ်ပြာ ခဏလေးများ B.O.B (Bank Of Bangal) Enjoy! L>ownload Credits to those who firstly shared it on net.
November 21, 2011 mars အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) လေးဖြူ3Comments
Lay Phyu – Songs That I Listened From His Albums
A Teit Yale A Yeit A Lin Yaung A Taung Pan Myar Nae’ Hlan A Way Nout Htet Doe Ma Way Bu Hmone Lite Nya Yale Suu A Thale Kwel Thichi Thit Sone Ma A Hlwan Myar A Kaung Sone Ma Nat Pyan Myitzuri A Thone Ma Kya Tae’ Hninsi Ta Koe Yay Hlwan Soot … Continue Reading →
November 18, 2011 mars အဆိုတော် (ကျား) လေးဖြူ 8 Comments
လေးဖြူ – တိမ်တွေဖုံးတဲ့ လ
May 24, 2011 Rambo30091974 အဆိုတော် (ကျား) လေးဖြူ Myanmar Artist Unreleased Albums 10 Comments
Dennis Martin ကြော်ငြာ လေးဖြူ – တန်ဖိုး mp3 http://www.mediafire.com/?6lh3p4ewd4og18p VCD http://www.mediafire.com/?8jv5ssr3q11d1wm credit to phoejune @ www.mmcybermedia.com
November 26, 2010 swordfish လေးဖြူ 1 Comment
ကိုလေးဖြူ ရဲ့ “အိပ်မက်ကဗျာ” တစ်ခွေလုံးကိုအစဉ်လိုက်အင်္ဂလိပ် ရှာထားတာပါ 01-Dream Theater – Another Day 02-Contraband – Bad For Each Other 03-Ozzy Osbourne – Perry Mason 04-Winter Rose – Dianna 05-Y & T – Don’t Be Afraid Of The Dark 06-Seal – Kiss From The Rose 07-Fair Warning – One Way Up 08-Journey – When I Think Of You 09-Megadeth … Continue Reading →
November 17, 2010 ZodicDie အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) လေးဖြူ Media Myanmar Artist 14 Comments
ကိုလေးဖြူရဲ့ အိမ်မက်ကဗျာ အင်္ဂလိပ် version လေးပါ
ကိုလေးဖြူရဲ့ အိမ်မက်ကဗျာ အင်္ဂလိပ် version လေးပါ သီချင်းကြိုက်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပဲ …………… ဒေါင်းလွတ်လုပ်ရန် MediaFire
November 15, 2010 Adar အဆိုတော် (ကျား) လေးဖြူ2Comments
မြန်မာ Rock Ballads တွေကော၊ Ballads မဟုတ်တာတွေကော ဒီPlaylist နဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး နားထောင်လို့ကောင်းမယ့် သီချင်းလေးတွေ စုပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Rock ကြိုက်သူများ ကြိုက်မှာပါ။ ညမီးအိမ် – အငဲ လိုချင်တာယူ – Alex အဆုံးသတ်ချိန် – ချမ်ချမ်း ကြိုနေစေချင်တယ် – G Latt နေပါစေချစ်လို့ – ထူးအယ်လ်လင်း မြိုင်နန်းစံပန်းတစ်ပွင့် – ထွဏ်းထွဏ်း မမေ့နိုင်ဘူး – လေးဖြူ မျှော်လင့်ခြင်းလေး – လေးဖြူ
July 27, 2010 amedeo အငဲ စည်သူလွင် ထုးအယ်လင်း ထွဏ်းထွဏ်း ဂျီလတ် ရိုင်းဟန် လေးဖြူ Media Leaveacomment
Three Sample Songs Of A Rocker
Three sample songs that you should listen and enjoy. Three Sample Songs Credit: ayinepan, mistake51area do adore and believe in music as it is.
July 20, 2010 mars အဆိုတော် (ကျား) လေးဖြူ Media Myanmar Artist2Comments